Agaasimaha Juventus oo ka hadlay wararka sheegaya in Cristiano Ronaldo uu Kooxda ka tagayo… (Miyuu Albaabada u furay bixitaanka CR7?) – Gool FM
(Turin) 23 Nof 2020. Agaasimaha Juventus ayaa ka hadlay wararka sheegaya in Cristiano Ronaldo uu kooxda ka tago dhowaan.
Fabio Paratici oo ah agaasimaha ciyaaraha Juventus ayaa soo jeediyey in Cristiano Ronaldo uusan kooxda ka tagi doonin mustaqbalka dhow.
35-sano jirkaan ayaa dhaliyey 73 gool 95 kulan oo uu u saftay Kooxda Juventus tan iyo markii uu kaga soo biiray Real Madrid, waxaana goolashaas ku jira siddeed gool oo uu dhaliyey lix kulan oo uu ciyaaray fasal ciyaareedkan 2020-21.
Ronaldo qandaraaskiisa kooxda Marwada duqda ah ayaa ku eg xagaaga 2022-ka, laakiin Kooxaha Manchester United, PSG iyo Real Madrid ayaa la la xiriirinayey xiddigan xulka qaranka Portugal todobaadyadii dhowaa.
Warbixin dhowaan soo baxday ayaa sheegtay in da’yarkii hore ee Sporting Lisbon uu la xiriiray shaqsiyaad sar sare oo garoonka Bernabeu ku sugan si uu ugala hadlo suurta-galnimada uu dib ugu laabanayo caasimada Spain.
Si kastaba ha noqotee, Paratici ayaa biyo qabow ku shubay wararkaas xanta ah ee sheegaya in weeraryahanku uu ka tagayo kooxda ka dhisan Turin.
“Waxaan xaqiijin karaa mustaqbalka Cristiano Ronaldo halkaan ee Kooxda Juventus,” Paratici ayaa sidaas u sheegay Warsidaha DAZN.
Waxaana uu hadalkiisa intaa ku daray: “Ahmiyad badan ma siinno wararka xanta ah, waxaa jira warar badan maalin walba.”
Kabtanka xulka qaranka Portugal ayaa labo jeer shabaqa soo taabtay kulankii dhowaa ee Sabtidii ay kooxdiisa Juventus 2-0 kaga adkaatay Cagliari.